खेतमा भेटियो रहस्यमय डल्लो, जाँच गर्दा यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा « गोर्खाली खबर डटकम
तीन वर्षीया छोरीलाई सु’ता’एर राति खोलामा माछा मा’र्न गएका द’म्प’त्ती विहान मृ’त फे’ला !
खेतमा भेटियो रहस्यमय डल्लो, जाँच गर्दा यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा
एजेन्सी । विश्वमा कुनै यस्ता रहस्य हुन्छन् जो अचानक नजिक आउने गर्छन्। जुन चिज रहस्यमय तथा ऐलिहासिक समेत हुने गर्दछन्।
यस्तै भयो अमेरिकास्थित एनटोनिया निवासमा पनि । उक्त घर नजिकै एलियनको अड्डा भेटिएको दाबी गरिएको छ। एलियनलाई दोस्रो ग्रहको जीवका रुपमा लिइन्छ। अर्जेन्टिनाका बुएनोस एरेस अमेरिकाको कार्लोसमा बस्दै आएका थिए। एक दिन आफ्नै खेलको नजिकै हिँडदै गर्दा उनका आँखा खेतमा भएको अनौँठो बस्तुमा ठोक्कियो। उक्त बस्तु अड्डाको आकारको थियो। जुन माटोले पुरिएको थियो।
पहिले त ती किसानलाई उक्त बस्तु ढुङ्गा जस्तो लाग्यो, तर पछि राम्रोसँग हेरेपछि उनलाई रहस्यमय बस्तु भएको महशुस भयो। उक्त बस्तुको माथि सर्पको जस्तो कत्ला थियो भने अर्को तर्फ प्वाल थियो। त्यसपछि ती किसानले आफ्नी पत्नीलाई उक्त बस्तु देखाए। उनीहरुले पहिले उक्त बस्तु डायनोसरको अड्डा भएको अनुमान गरेका थिए। जब उनीहरुले उक्त बस्तु उठाउन खोजे तर बस्तुले हलचल समेत गरेन्।
त्यसपछि अनुसन्धान कर्तालाई बोलाएर उक्त बस्तुको जाँच गर्दा रहस्य बाहिरीयो। उक्त बस्तु डायनोसर नभएर यलियनको अड्डा भएको पुष्टी भयो। एक्सपटेर्सको अनुसन्धानले उक्त बस्तु एक प्राचिन जीव भएको तथा जसको नाम ग्लिप्टोडोँ रहेको पत्ता लाग्यो। जो १५ हजार वर्ष पहिले साउथ अमेरिकामा पाइने गर्थे ।
पहिले फोटो खिचे अनि पसल भित्र छिर्न खोज्दै थिए, पछि पो थाहा भयो यी त….
कुन राशिका व्यक्ति कुन भगवानको प्रिय ? जान्नुहोस्